देउवा फेरी प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का , यसरी पुग्यो बहुमत - Rising Dainik
May 4, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on देउवा फेरी प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का , यसरी पुग्यो बहुमत
काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले २७ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीले सांसदबाट विश्वासको मत लिने भएपछि सो प्रक्रियामा विपक्षी गठबन्धनलाई जोड्ने प्रयास गरेको छ।
पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकबाटै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरिसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा उभिने निर्णय पदाधिकारी बैठकबाट गर्दै छ। काँग्रेसले सो विषयमा छलफल गर्न आज २ बजे पदाधिकारीसहित पूर्व पदाधिकारीलाई छलफलमा बोलाएको छ।
काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले काँग्रेसले पार्टी निर्णय अनुसार नै आफूलाई अघि बढाउने बताए। ‘पहिले नै निर्णय भइसकेको छ, प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्ने विषयमा काँग्रेस तयार छ, अरू दलसँग पनि कुराकानी हुँदै छ,’ काँग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले हाम्रा कुरासँग भने।
काँग्रेस सह महामन्त्री डा. प्रकाश सरण महतले सरकारको विकल्पका विषयमा विपक्षमा रहेका दलहरूसँग पहिलेबाट नै संवाद हुँदै आएको र पुनः छलफल हुने जानकारी दिए। ‘सरकारको विकल्प खोज्ने विषयमा सत्ता बाहिरका दलहरूसँग संवाद पहिलेबाट नै हुँदै आइरहेको छ, पुनः छलफलहरू भइरहेका छन्,’ काँग्रेस सह महामन्त्री महतले भने।
काँग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरिसकेकाले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने बताए।
उनले माओवादी केन्द्र र जसपाले समेत प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोजिसकेकाले ती दललेसमेत प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने बताए।
‘माओवादी केन्द्र र जसपाले समेत प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोजिसकेका छन्, राजीनामा मागिसकेका छन्, ती दललेसमेत प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गर्छन्,’ निधिले भने।
काँग्रेसले आज बोलाएको पदाधिकारी बैठकमार्फत पार्टीको १४औँ महाधिवेशनको तयारी, क्रियाशील सदस्यताको छानबिन लगायतका विषयमा पनि छलफल गर्ने काँग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।
बालुवाटार पुग्यो माधव नेपाल पक्षको २१ सांसदको सामूहिक राजीनामा ! नामावली सहित
के ओलीले पाउलान् त विश्वासको मत ? संसदमा यस्तो छ अंकगणित
May 5, 2021 Ramash Kunwar
काठमाडौंमा मास्क नलगाउनेलाई अब का’रबाही (विज्ञप्ति)
March 24, 2021 Ramash Kunwar